Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Sheekada Carruurnimada Tom Davies Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Laga bilaabo, magaciisa dhabta ahi waa “Thomas". Waxaan ku siinaynaa dabool buuxa oo ah Taariikhda Carruurnimada Tom Davies, Taariikh nololeedkiisa, Xaqiiqda Qoyska, Waalidiin, Nolosha Hore iyo dhacdooyinka kale ee xuska ah laga soo bilaabo markii uu cunugga ahaa ilaa markii uu caan noqday.
Sheekada Carruurnimada Tom Davies- Bal eeg noloshiisa hore iyo Sare u kaca. Dhibcaha: SportsdotNet, Twitter iyo SkySports
Haa, qof walbaa wuu ogyahay Davies inuu yahay mid ka mid ah khadka dhexe ee ugu fiican kubada cagta Ingariiska. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa ka fiirsanaya qaabkeena Tom Davies 'Biography kaas oo aad u xiiso badan. Hadda iyada oo aan la sii socon, aynu marka hore ku bilownaa saldhiggiisa aqooneed ee Wiki iyo miiska nuxurka ka hor sheekada oo dhammaystiran.
Xaqiiqda Taariikh nololeedka Tom Davies (Weydiimo)
Magaca buuxa: Thomas Davies (Magaca dhabta ah)
Taariikhda Dhalashada: 30-June-1998
Meesha dhalashada: Liverpool, England
Age: 21 (Sida ay ahayd Febraayo 2020)
Meesha uu ku koray: West Derby (Bariga Liverpool, England)
Magaca Waalidka: Daine Davies (Hooyo) iyo Tony Davies (Aabe)
Walaalo: Liam Davies (Walaal Waayeel ah)
Bandhiga Muusigga ee La Jeclaado: Boqorradii Leon
Cuntada aad Jeceshahay: Baastada 'pesto' oo leh jiis parmesan.
Saaxiibka ugu Fiican: Dominic Calvert-Lewin
Dhererka: 5 ft 11 ee (1.80 m)
Kaalinta Ciyaaraha: Khadka dhexe
Waxbarashada Hore ee Kubadda Cagta: Kubadda Cagta Iskuulka iyo Tranmere Rovers
Tom Davies ' Sheekada Carruurnimada:
Sheekada Carruurnimada Tom Davies- Bal eeg aragti cad oo sawirradiisa carruurnimada ah. Dhibcaha: FPCP-BlogSpot
Bilaabidda, magaciisa oo dhan waa Tom “Thomas” Davies. Tom wuxuu ku dhashay 30-kii Juun 1998-dii hooyadiis Daine Davies (timo-jaraha) iyo aabaha, Tony Davies (waa shaqaale dowladeed) magaalada Liverpool. Xiddiga reerka wuxuu ku koray garab walaalkiis ka weyn Liam si wada jir ahna, waxaa soo korsaday waalidkood Galbeedka Derby. Dacwad aadan ogeyn?… West Derby waa xaafad barwaaqo ah oo ku taal bariga Liverpool, England.
Taariikhda Qoyska Tom Davies:
Qoyska Tom Davies wuxuu ka tirsan yahay qowmiyadda Liverpool ee u dhalatay Ingiriiska oo ku hadla luqadda Ingiriiska. Merseyside oo ku dhashay khadka dhexe ayaa qoyskiisa asal ahaan ka soo jeeda Liverpool, magaalada caanka ah ee Badda UK ee waqooyiga-galbeed ee England. Waa magaalo heysata uruurinta ugu layaabka badan madxafyada Yurub. Sidoo kale, waxay ahayd tii ugu horreysay ee yeelato jidka tareenka rakaabka ugu horreeya ee adduunka.
Tom Davies wuxuu ku koray asal qoys dabaqadda dhexe ah, iyadoo inta badan xubnaha qoyskiisa ay ku nool yihiin agagaarka Liverpool ee West Derby. Lahaanshaha hooyo ku shaqeysata dharka timaha lagu xirto iyo aabe heysata fasalka dhexe ayaa muujinaya in labada waalid ee Tom Davies ay ahaayeen kuwa deggan.
Tom Davies ' Nolosha Hore ee Kubadda iyo Waxbarashada:
Markii uu yaraa, waaliddiinta Tom Davies waxay ku qoreen dugsiga Merseyside ee maxalliga ah, kaas oo ku dhiirrigeliyay carruurtooda inay ka qeybgalaan tartanka kubbadda cagta ee dugsiga. Sida laga soo xigtay Telefon, yar Tom (sawirka hoose) wuxuu ahaa arday dhalaalaya, mid aad u wanaagsan gaar ahaan xisaabta iyo sayniska.
Little Thomas wuxuu kubbadda cagta ku cayaaray dugsiga, waqti ay iskuulada Liverpool ay arrimo ka qabeen akadeemiyada naadiga oo ay ku qaadaan ardaydooda ugu wanaagsan. Dhibcaha: FYC
Waqtigaas, waalidiinta Tom Davies waxay ahaayeen aragti ah in wiilkoodu uusan ku xadgudbin waxbarashadiisa kubada cagta. Daine iyo Tony labaduba waxay rabeen Tom yar inuu gaaro heerka Jaamacadda. Nasiib darrose, arrimihuna sidii ma ay raacin sidii ay iyagu u jeclaan lahayn-aayo aayaha.
Saamaynta Tom Davies 'Adeerkiis:
Xitaa iyadoo waxbarashadda loo qabtay ahmiyad weyn, jacaylka Tom ee kubada cagta wuu ka badiyay mahadcelintii ka timid hal-nin. Wax kale maahanadeerkiis- Alan". Ma ogeyd?… hiddo-wadayaasha kubbadda cagta waxay sidoo kale ka shaqeeyaan Tom Davies 'Qoyska iyada oo loo marayo adeerkiis caan ah, Alan Whittle. Alan (sawirka hoose) oo Tom u eg wajiga hore ee u ciyaaray Everton iyo Crystal Palace 1970-yadii.
La kulan Tom adeer Uncle, Alan Whittle- Maxaad u aragtaa muuqaalkooda? XIGASHO: Twitter
Alan Whittle wuxuu ka caawiyay Tom Davies inuu noqdo xoog lagu xisaabiyo kubada cagta iskuulka Merseyside. Ka fog dugsiga, Davies ayaa masixiisa ku qaatay gacantiisa madaama uu marar badan ku takhasustay xirfadiisa garoonka kubada cagta ee West Derby.
Tom Davies ' Nolosha Xannaano Hore:
Awoodda kubada cagta ee Davies ayaa soo baxday intii lagu jiray muddadii muran u dhaxeeyay akadeemiyada kubbadda cagta iyo nidaamyada kubbadda cagta Merseyside. Xilligaas, nidaamyada dugsiga Merseyside waxay ka niyad jabeen hibooyinkooda soo ifbaxa ah ee ka qeybgalka akadeemiyada kubbadda cagta. Tani waxay u timid sababtoo ah waxay had iyo jeer dareemayaan inay go'doon yihiin iyo inay shisheeyaan.
Little Davies wuxuu saameyn ku yeeshay maxaa yeelay wuxuu rajeynayay inuu ku biiro akadeemiyada isla waqtigaasna, ka qeyb galo kubbadda cagta dugsiga. Waxaa jiray hal xulasho oo keliya isaga, waxay ahayd ama wuxuu ku biiray akadeemiyad ama sii waday kubbadda cagta dugsiga. Gabagabadii, waalidiinta Tom Davies waxay u oggolaadeen inuu ka baxo kubbadda cagta dugsiga si uu ugu biiro akadeemiyadda Tranmere Rovers ee ku taal Liverpool.
Taariikhda Tom Davies ' Wadadiisii ​​Sheekada Caanka:
Fahmitaanka wiilkooda rabitaankooda kubbadda cagta noloshooda, xubnaha qoyskiisa Tom Davies gaar ahaan adeerkiis waxay sameeyeen wax kasta oo ay karaan oo ay ku taageeraan himilooyinkiisa. Intii uu joogay Tranmere Rovers, wax yar Tom wuxuu noqday a xiise leh whiz kid. Qaab ciyaareedkiisa ayaa soo jiitay akadeemiyada kubada cagta ee Everton, mid ka mid ah labada naadi ee ugu waaweyn Ingiriiska oo ka socda Liverpool.
Sannadkii 2009 markii uu jiray 11, Tom wuxuu magiciisa horay u galay sumcadda Toffee ee akadeemiyada akadeemiyada kadib tijaabooyin guul ah oo uu la qaaday kooxda. Sawirka hoose, waxay ahayd daqiiqad saafi u ah naftiisa iyo xubnaha qoyskiisa.
Tom oo dhalinyaro ah oo faraxsan Tom 2009- Sannadkii uu ku biiray Everton. Dhibcaha: FPCP-Blogspot
Runtu waa, thalkan guul guul ah kama uusan gaarin akadeemiyada Everton. Davies aad buu loogu farxay mahadnaqnimadiisa iyo dabeecaddiisa hogaamineed ee uu haystay. Ma ogeyd?… Dabeecaddiisa iyo qaab ciyaareedkiisa ayaa sidoo kale ka dhigtay in loogu yeero xulka qaranka U16 ee sannadka 2013. Sidii la filayay, Davies wuxuu sii waday inuu ka soo baxo darajada qaran, isagoo noqday kabtanka dhalinyarada England.
Taariikhda Tom Davies ' Ujeeddadiisi Sheekadii Caannimada:
Tan iyo xilligii Davies uu ahaa kabtanka xulka Ingriiska, horumarkiisa wuxuu noqday mid deggan iyadoo rajo laga qabo inuu ka hoos baxo tababare Roberto Martinez oo shaqada kala wareegay. David Moyes. Intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2014-15, wuxuu u dalacsiiyay kooxda Everton ee da 'doodu ka hooseyso 21-sano jirka.
Dhamaadka xilli-cayaareedka, wuxuu saxeexay qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfad-yaqaanimo, daqiiqad farxad u ah adeerkiis, waalidiinta iyo xubnaha qoyska. Tom Davies ayaa qaab ciyaareed cajiib ah la soo qaatay kooxda Everton ee U21 waxa uuna ku abaalmariyay kulankiisii ​​ugu horeysay ee Premier League ee uu hogaamiyo tababare Roberto Martínez.
Da 'yarta, ee ku mahadsan caqligiisa dariiqa iyo cidhifyada kubada cagta ee iskuulka markii la asaasay waqti ka hor. Axadda 15-Janaayo 2017 waa taariikh muhiim u ah taariikhda Tom Davies Biography oo uusan waligiis ilaawi doonin. Waxay ahayd maalintii uu rumaysto riyadiisii ​​caruurnimada markii uu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed ee kooxda Everton kulankii Manchester City.
Sawirka hoose, Davies wuxuu muujiyey degenaansho weyn kadib markii uu si fiican u jebiyey kubbada Claudio Bravo inuu soo xusho hadafkiisii ​​ugu horreeyay ee abid. Qaab ciyaareedkiisii ​​waxa uu dhaliyay isaga bishii Janaayo ee abaalmarinta PFA taageerayaasha bisha iyo abaalmarinta da 'yarta da' yarta.
Muuqaal ah waqtigaas xusuusta leh ee Thomas wuxuu dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay isagoo ciyaaryahan weyn ah. XARUNTA: Symimes iyo DailyMail
Ugu dhakhsaha badan waqtiga qorista Tom Davies Biography, waxaan si kalsooni leh u dhihi karnaa noloshiisa ayaa isbedelay. Xaqiiqdii ma ahan kubada cagta celcelis ahaan wuxuuna la qabsaday inuu yahay nin da 'yar oo baahida loo qabo. Tom wuxuu u soo ciyaaray kooxda uu jecel yahay (Everton) 74 jeer kahor dhalashadiisa 21aad.
Shaki la'aan, anaga oo ah taageerayaasha kubada cagta waxaan qarka u saaran nahay inaan aragno qadka dhexe ee qadka dhexe oo u ifinaya waddadiisa hibo heer caalami ah indhahayaga hortooda. Tom Davies runtii waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican soosaarka qadka dhexe ee wax soo saar ee khadka dhexe ee ka soo baxa England. Inta soo hartay, sida aan nidhaahno, hadda waa taariikh.
Waa kuma Tom Davies ' Gabadh?
Kordhintiisa caannimada iyo shaqsiyada wanaagsan, waxaa hubaal ah in qaar ka mid ah taageerayaasha Everton iyo England ay aheyd inay ka fekeraan cidda gabadha Tom Davies ay noqon karto. Ama inuu isagu guursaday xaas, iyo caruur. Runtu waxay tahay, ma jiraan wax dafiraya xaqiiqada ah in muuqaalka Tom ee aadka u quruxda badan uusan ka dhigi doonin isaga A-Lister loogu talagalay saaxiibbada suurtagalka ah iyo qalabka haweeneyda. Sida Philippe Coutinho.
Taageerayaasha Everton iyo England ayaa isweydiiyay- Waa kuma Tom Davies shukaansi? Ma leeyahay gabar saaxiib ah? mise naag?. Dhibcaha: IG
Ka dib baaritaanno dhowr ah oo aan ku sameynay internetka, waxaan u nimid ogaanshaha inuu Tom Davies kaligiis noqon karo (sida waqtiga qoraalka).
Tom Davies ' Nolosha Qofka:
Barashada Tom Davies Nolosha Qofka. Dhibcaha: Instagram
David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo Dhammaantood waxay leeyihiin mojo rasmi ah halka ciyaartoyga kale ay si uun wax u leeyihiin (dambi maleh Danny Drinkwater!). Tom Davies waa hal nin oo tusiya dunida in- Uma baahnid inaad noqotid xiddig weyn si aad u fiican u qabowso.
Xitaa isagoo wata Kabaha Cagaaran, timaha dhaadheer, dharka miraha leh, muuqaal cajiib ah, shaqsiyada Tom ee garoonka ayaa wali la ilaaliyaa. Tom Davies wuxuu daawo u yahay caqiidada guud ee bulshada (Stereotype) ee ku aadan muuqaalka ciyaartooyda iyo awooda ay u leeyihiin inay hogaamiyayaal noqdaan. Xitaa muuqaalkiisa cajiibka ah, Tom aad u gaar ah, dhowr jeer ayaa hogaamiye ka noqday garoonka. Ma ogeyd?… Tom Davies ayaa kabtan u ahaa, da’yarka reer England iyo xitaa kooxda sare ee Everton.
Ugu dambeyntiina, Nolosha shaqsiyadeed ee Tom Davies, qadka dhexe waa qof dareemaya inuu aad ugu qanacsan yahay qaabkiisa. Ma jecla inuu dad kale saameyn ku yeesho. Tom wuxuu rumeysan yahay inuu kaliya u baahan yahay inuu ku fiicnaado waxa uu sameeyo halkii uu u hoggaansami lahaa waxa dadka qaarkiis (tusaale; kuwa doonaya inay xirtaan kaydyo dhaadheer oo timo jartana) raba isaga inuu sameeyo.
Tom Davies ' Hab-nololeedka:
Barashada Tom Davies Nolosha garoonka dhexdiisa. Dhibcaha: Instagram
Barashada qaab nololeedka Tom Davies wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho sawir buuxa oo ku saabsan heerka noloshiisa. Bilaabidda, waxaad naga aqbali doontaa inuu isagu yahay tIsagu waa kubad sameeyaha ugu fiican adduunka oo dhan. Sida wakhtigii qorista, Davies ma noola qaab nololeed raaxo leh si fudud looga arki karo baabuurta jilicsan, guryaha waaweyn (guryaha waaweyn) iwm.
Sida kor ku xusan, Tom's inkasta oo qiimahiisa saafiga ah iyo qiimaha suuqa uu weli doorbido inuu wado baaskiil loo habeeyay sida gaarigiisa. Tani waxay calaamad u tahay noloshiisa is-hoosaysiinta. Tom ma qariyo xaqiiqda ah inuu taageerayo FC Barcelona xitaa sidii ciyaartoy Everton ah. Wuxuu jecel yahay qalabka loo yaqaan 'PlayStation console', kaasoo uu la ciyaaro Dominic Calvert-Lewin (saaxiibkiis ugu fiican).
Tom Davies ' Nolosha Qoyska:
Qofkasta oo Liverpool jooga wuu jecel yahay marka qof ka socda magaalada uu si wanaagsan wax u qabto, marka kaliya maahan reerka Tom Davies ee ku faana guulaha uu gaadhay. Dadka ka socda magaalada Liverpool waxay dareemaan shucuur markay arkaan inay iyagu iska leeyihiin oo ay wax fiican u socdaan. Tusaalooyinkii ugu dambeeyay waa; John Lundstram iyo Chris Wilder kuwaas oo hormuud ka ah kubada cagta Ingariiska. Qeybtaan, waxaan ku shubi doonaa iftiin badan nolosha qoyska, anagoo la socon doona mid ka mid ah waalidiinta 'Tom Davies' hooyadiis.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan Hooyada Tom Davies:
Daine Davies waa timo-jaraha caanka ah ee Liverpool iyo hooyada weyn ee Tom Davies. Daine waa nooca hooyada sida wanaagsan ugu xiran wiilkeeda. Davies wuxuu u sheegay Daily Mail in dib ugu soo laabto akadeemiyadiisa, hooyadiis wax dan ah kama qabin inay xirto gogosha timaha lagu xirto si ay ugu kaxeyso Finch Farm (Garoonka tababarka kooxda Everton). Tani waxay dhacday xitaa markii uu ahaa ciyaaryahan weyn laakiin weli ma uusan ka gudbin imtixaankiisa wadista. Wareysi, Davies mar ayuu sidan ka sheegay hooyadiis;
"Hooyaday subax walbaa way i keentaa wayna i tuurtaa, ”Ayuu yidhi Davies, isagoo wejigiisu wejiga ka muuqdo. Markii la weydiiyay hadii uu ku jees jeesay asxaabtiisa Toffees, waxa uu ku jawaabay:Haa, laakiin wax qalad ah uma arko!"
Wax badan oo ku saabsan Tom Davies 'Aabaha:
Tony Davies waa aabaha qabow ee Tom. Waa aabe noocee ah oo ku raaxeysanaya inuu wiilkiisa Davies agtiisa joogo halkaas oo labadooduba ay wada daawadaan kulamadooda. Sida laga soo xigtay Telegraph, Davies ayaa mar dhahay ka dib hadafkiisii ​​ugu horreeyay ee mustaqbalkiisa ciyaareed, wuxuu u aaday gurigiisa qoyskiisa si uu u daawado ciyaarta uu la ciyaarayo aabihiis super (Tony). Labada aabbe iyo wiilkoodba waxay dhiseen xiriir cajiib ah, oo ah mid weligiis sii jiri doona.
Ku saabsan Tom Davies 'Walaalkiis- Liam:
Waaliddiinta Tom Davies uma aysan haynin sidii ilmahooda oo keliya. Kubadda cagta Ingriiska ee kor uqaadeysa wuxuu leeyahay walaal weyn oo magac leh Liam Davies. Tom Davies walaalkiis sida isaga oo kale isna wuxuu u galay isboorti. Sida laga soo xigtay Wikipedia, Liam waa cayaaryahan xirfad-yaqaan ah oo u ciyaara kooxda Curzon Ashton. Warbixin kale ayaa leh in Liam sidoo kale yahay Chef fiican, kaas oo ku kariya cunto nooc kasta leh asaga oo jecel in uu yahay baastada pesto iyo jiiska parmesan.
Ku saabsan adeerka Tom Davies:
La kulan adeer Tom Davies ', Alan Whittle- Maxaad u aragtaa muuqaalkooda
Alan Whittle waa adeer Tom, kii aan dhahnay wuxuu mas'uul ka ahaa inuu iska indhatiro shaqadii Davies, taasoo ka dhigtay inuu horumar sameeyo ka ciyaar ahaan. Sida ugu fiican, Tom Davies waa adeerkii ciyaaryahankii hore ee Everton kaasoo 74 kulan u saftay kooxda intii u dhaxeysay 1967 iyo 1972.
Tom Davies ' Xaqiiqooyinka:
Qeybtaan Tom Davies Biography, waxaan kugu soo bandhigi doonaa xaqiiqooyin taariikh nololeed oo lama huraan ah oo ku saabsan Liverpool ku dhashay iyo kubadsameeyaha West Derby.
Xaqiiqada 1- Burburinta Mushaharka Tom Davies ee Sekan:
Saddexdii bilood ee hore ee 2019, qadka dhexe ee Ingriiska wuxuu heshiis la galay kooxda Everton, kaasoo ka kooban mushahar qaadis dhan £ 1,293,684 (Milyan Pound) sanadkiiba. Adoo jeex jeegaya Tom Davies mushaharka ilbiriqsiyo, daqiiqad, saacad, maalin, iwm,… waxaan haynaa waxyaabaha soo socda;
Mushaharka Tom Davies ee Pound (£)
Mushaharka Tom Davies ee Euro (€)
Mushaharka Tom Davies sanadkiiba £ 1,293,684 € 1,500,000
Mushaharka Tom Davies bishii kasta £ 107,807 € 125,000
Mushaharka Tom Davies Isbuucii £ 26,294 € 30,488
Maalintii Mushaharka Tom Davies £ 3,534 € 4,098
Mushaharka Tom Davies saacaddii £ 147 € 171
Mushaharka Tom Davies daqiiqaddii £ 2.45 € 2.85
Mushaharka Tom Davies daqiiqad kasta £ 0.04 € 0.05
Tani waa inta uu ku kasbaday Tom Davies tan iyo markii aad bilaawday daawashada Boggan.
Haddii waxa aad kor ku aragto wali akhrinayso (0), markaa waxay ka dhigan tahay inaad arkaysid bogga AMP. Hadda Riix HALKAN si loo arko mushaarkiisa oo kordhaya ilbiriqsiyo. Ma ogeyd?… Ninka celceliska ah ee Boqortooyada Midowday wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo ugu yaraan 3.6 sano si loo kasbado £ 107,807, taasoo ah lacagta uu ku helo Tom Davies 1 bil kaliya.
Xaqiiqada # 2- Wixii ku saabsan Tom Davies Timaha:
Sababta ka dambeysa Timaha Tom Davies. Dhibcaha: SB-Nation, Zimbo iyo EvertonFC
Shaki la'aan, timaha dhaadheer ee timaha dheer wuxuu ka dhigayaa inuu isla markiiba lagu garan karo garoonka dhexdiisa. Xaqiiqda ah in xubnaha Tom Davies ay taageeraan timahooda ayaa mar siiya macalinkiisa dhalinyarada dhamaan rasaasta si ay u laayaan. Tani waa sababta oo ah wuxuu u maleeyay in timaha asal ahaan ka yimaadeen Daine, hooyadiis, iyo timo-jaraha. David Unsworth [Tababaraha kooxda Everton ee da'doodu ka yar tahay 23-sano] wuxuu u siin jiray Davies culeys timireed timaha, markastana wuxuu usheegay inuu gooyo. Markii wax laga weydiiyay timahiisa, Tom wuxuu mar yiri;
Waxaan bilaabay inaan sii kordhayo timahayga dhawr sano ka dib, ka dibna waan ka takhalusay. Isla markiiba, waxaan bilaabay inaan ka maqnaado, marka waa inaan dib u soo noqdaa.
Kubadda cagta Premier League-ga ayaa sheegay in kasta oo qiraya in hooyadey Diane tahay timo-jaraha.
Xaqiiqada # 3- Sababta Tom Davies u xidho kaydka gaagaaban:
Waxaan kuu sheegeynaa sababta qadka dhexe uu xirto kaydyo gaagaaban ?. Dhibcaha: Zimbo
Timahiisa ilaa gadhkiisa aan gadhka ku xidhnayn, ka dib ilaa tolkihiisa gaaban, Tom Davies waxay qabataa mala-awaalka kubadsameeyaha xorta ah. Ma ogeyd?… Dugsiga hore ee Tom, sharaabaadyada dharka hoose leh ayaa kicin kara tixraac aan sal lahayn oo ku saabsan adeerkiis, Alan Whittle. Haa, wuxuu taas sameeyaa si uu u sharfo adeerkiis Alan Whittle oo mar xidho kaydyo gaagaaban inta uu ku sugnaa Everton. Ilaa iyo hadda, dad badani ma tixgeliyaan Tom oo keliya, laakiin ciyaartoy kale oo jecel ayaa jecel Jack Grealish aan caadi ahayn sababta oo ah go'aankooda ah inay sharaabaadyo ku xiraan shaashadda.
Xaqiiqada # 5- Tom Davies Qiimeynta FIFA:
Davies markay tahay 21 (laga bilaabo Febraayo 2020) wuxuu leeyahay awood uu ku noqdo mid ka mid ah khadka dhexe ee ugu fiican Ingariiska FIFA. Xiddiga qadka dhexe wuxuu leeyahay qiimeyn suurtagal ah oo FIFA ah oo ah 82, taasoo ka dhigeysa inuu hubiyo inuu u iibsado kuwa jecel hab-dhaqanka FIFA.
Khadka dhexe wuxuu leeyahay Fiicnaan Fiican FIFA, runti waa mid mustaqbalka. Dhibcaha: SoFIFA
Xaqiiqada # 6- Tom Davies Tattoos:
Tom waqtiga qorista ma rumeysto Dhaqanka Tattoo oo aad looga jecel yahay adduunka isboorti maanta. Sawirka hoose, qadka dhexe uma baahna xiddig xubin jirkiisa kore iyo qeybta hoose si uu u muujiyo diintiisa, waxyaabaha uu jecel yahay ama xubnaha qoyskiisa.
Thomas noo gaar ah ma rumaysto (waqtiga qoraalka) ma rumeysto Tattoos. Dhibcaha: Instagram
Xaqiiqada # 7- Tom Davies Diinta:
Tom Davies 'magaca dhabta ah'Thomas”Waa magac asal ahaan kitaabiga ah. U sheegista magacaani waxay muujineysaa in waalidiinta Tom Davies ay u badan tahay inay Masiixiyiin yihiin. Waqtiga qoraalka, ma jiraan wax calaamad ah oo muujinaya inuu Tom ku weyn yahay diinta. Si kastaba ha noqotee, waan kugula soo socodsiin doonnaa isla marka ay jirto jiritaanka caddeyn sawir oo muujineysa dhaqankiisa diinta masiixiga.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriskayaga Taariikhda Dhalashada Tom Davies Plus Xaqiiqooyinka Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
James Ward-Prward Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-hadal aan la isku qorin